इपीएस दिएर बसेकाहरु कोरिया जान पाउने – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/इपीएस दिएर बसेकाहरु कोरिया जान पाउने
इपीएस दिएर बसेकाहरु कोरिया जान पाउने
काठमाडौं । कोरिया जान चाहने नेपाली कामदारहरुलाई दुइ देशको सरकारको छलफलमा कोरिया जान पाउने भएका छन् । आइतवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । इपिएस अन्तरर्गत कोरिया जाने श्रमिकहरुलाई दुई देशको आपसी सल्लाह र सहमतिमा कोरिया लैजाने अनुमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको खतिवडाले बताए ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि इपीएस उत्तीर्ण नेपालीलाई दक्षिण कोरिया जान रोकिएको थियो। त्यस्तै कोरोनाको जोखिम थप नबढोस भन्नका लागि दक्षिण कोरिया जान तयार ५० जना नेपालीको उडान मिति तय भएको भए पनि तत्कालका लागि सार्ने निर्णय गरिएको थियो । हाल कोरियामा करिव ४० हजार नेपाली कामदारहरु काम गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लक डाउनको समय १० दिन थप गर्दै वैशाख २५ गतेसम्म जारी राख्ने निर्णय गरेको हो । पछिल्लो पटक थप भएको समय वैशाख १५ गते सोमबार सकिँदै थियो । पूर्वनिर्धारित लक डाउनको समय सकिनु एक दिन अगाडी नै सरकारले १० अझ लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो । पहिलो पटक सरकारले चैत ११ गतेबाट लागु हुनेगरी एक हप्ताका लागि लक डाउन घोषणा गरेको थियो । त्यपछि पटक पटक समय थप हुँदै वैशाख १५ गतेसम्म पु-याइएको थियो ।
आइतबार नै बैठकले अन्तर्राष्टिय सीमानाकाहरु वैशाख ३१ गतेसम्म बन्द नै राख्ने निर्णय गरेको छ । बाह्य जगतबाट कोरोनाको जोखिम अझै रहेकाले सीमानाकाहरु वैशाख ३१ गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय बैठकले गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. खतिवडाले बताए ।
जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार नेपाली समयअनुसार आईतवार मृत्यु भएका यो सहित अमेरिकामा सबैभन्दा बढी ५४ हजार २६५ जनाको मृत्यु भएको छ भने युरोपेली मुलुकहरुमा मृतकको संख्या १ लाख २० हजार १३८ जना पुगेको छ ।
भान्जाको विवाह भोज खान गएका पुरुष हात खुट्टा काटिएको अवस्था फेला
क्वारेन्टिनबाट घर फर्किएपछि मृत्यु भएका कैलालीका युवकको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ